Online QR Code Generator • Pageloot ကို အသုံးပြု၍ စိတ်တိုင်းကျ QR ကုဒ်များဖန်တီးပါ
Online QR Code Generator ကို အသုံးပြု၍ စိတ်ကြိုက် QR Code များကိုဖန်တီးရန်အဆင့် ၅
ထို့ကြောင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း QR ကုဒ်များသည်ကြီးမားသောပြန်လည်ပတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအကျိုးကျေးဇူးများမှာထင်ရှားသည်။ ပြနာကတော့ QR Codes အများစုဟာသူတို့ဟာ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေကလိုပဲ။ ဒီဟာကတော့မလိုပါဘူး၊ သင်တကယ်လိုအပ်တာကသင့်တော်ပါတယ် အွန်လိုင်း QR Code ကိုမီးစက်. QR Code Generator သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
Coronavirus (COVID-19) ကူးစက်မှုကာလအတွင်းသင်၏စီးပွားရေးနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပန်းတိုင်များကိုတက်လှမ်းရန်အခွင့်အလမ်းကိုယူပါ။ သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုစိတ်ကူးမရှိလျှင် QR Codes သည်သင်၏စီးပွားရေးကိုနောက်တစ်ဆင့်သို့မည်သို့ပို့ဆောင်နိုင်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
အဆင့် ၁ - သင်၏ QR Code အမျိုးအစားကိုရွေးပါ
သင်၏ QR Code အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ
အိုကေ၊ QR ကုဒ်များနှင့်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ကောင်းပြီ, QR ကုဒ်များကြီးမားတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိသည်။ သင့်အတွေးရထားကိုဤစာလိပ်၌ရရန်နမူနာအချို့ကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
link များ၊ လူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာများ၊ ပို့စ်များကိုမျှဝေပါ
သင်၏ Soundcloud၊ Youtube၊ Instagram ကိုမျှဝေပါ
PDF များနှင့်အခြား lead magnet ဖိုင်များကိုမျှဝေပါ
မည်သည့်ဖိုင်မဆို - ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ အသံ၊ PDF
မည်သည့်နေရာကိုသင်ရွေးချယ်ပါစေကျွန်ုပ်တို့အားကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည် အမြဲတမ်း Dynamic QR ကုဒ်များကိုသွားပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အင်္ဂါရပ်များစွာကိုပေးသည်။ အဓိကအကျိုးကျေးဇူးကတော့သင်စိတ်ပြောင်းလျှင်သင် QR Code ၏အကြောင်းအရာများကိုနောက်မှပြောင်းလဲနိုင်သည်။
မင်းရဲ့ QR Codes ကိုမင်းပုံနှိပ်ပြီးပြီဆိုပါစို့။ ကန ဦး အယူအဆကလူတွေကိုသင့်ရဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုလာလည်ရန်ဖြစ်သည်။ ယခုသင်ကသင်၏ instagram စာမျက်နှာပေါ်သို့ရောက်လျှင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုအီးမေးလ် funnel တစ်ခုထဲတွင်ထည့်လိုလျှင်ပိုကောင်းလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ခဲ့သည်။ ကောင်းပြီအဘယ်သူမျှမပြproblemနာ! Pageloot Online QR Code Generator ကို အသုံးပြု၍ သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဒုတိယကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးမှာသင်လုပ်နိုင်သည် လူအပေါင်းတို့ကိုခြေရာခံ သင်၏ QR Code ကိုမည်သူစစ်ဆေးသနည်း။ သင်၏ကုဒ်များကိုမည်သူစစ်ဆေးပြီးမည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်အချိန်တွင်စစ်ဆေးသည်ကိုချက်ချင်းခြုံကြည့်နိုင်သည်။
အပိုဆုကြေးတစ်ခုအနေဖြင့် Pageloot သည်သင့်အားခွင့်ပြုသည် Facebook Pixel (သို့) Google tracking ကုဒ်ကိုထည့်ပါ။ ဤသည်ကသင်သည်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်များ၊ အမှန်ကတော့သင့်ရဲ့ Analog ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်သည်များကိုဒီဂျစ်တယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေကိုအခြေခံပြီးပစ်မှတ်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးပါ။ အဲဒါဘယ်လောက်တန်ခိုးကြီးသလဲ
အဆင့် ၂ - အကြောင်းအရာကိုထည့်ပါ
ယခုနောက်အဆင့်သည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အဆင့် ၁ မှသင်ရွေးချယ်သော QR Code အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ သင်၏အကြောင်းအရာများကိုထည့်သွင်းလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၀ ဘ်ဆိုဒ် QR ကုဒ်အမျိုးအစားကိုသင်ရွေးချယ်ပါကသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ URL နှင့်ကုဒ်အတွက်ထူးခြားသောနာမည်တစ်ခုလည်းရိုက်ထည့်ရန်လိုသည်။ ။ နာမည်ကမင်းရဲ့ရည်ညွှန်းချက်အတွက်ပဲ။ ဒါကြောင့်သင် QR Code လိုပဲရာနဲ့ချီတဲ့ကုဒ်တွေရှိရင်နောက်မှအလွယ်တကူရှာတွေ့လိမ့်မယ်။
၎င်းသည် ၅ ၏အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးအဆင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အလွန်ရိုးရှင်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာတွင်အလွန်အမင်းရပ်တန့်စရာမလိုပေ။
အဆင့်3- ထူးခြားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုကြည့်ပါ
သင်၏ထုံးစံအတိုင်းသင်၏ QR Code ကိုပေးပါ
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် default pixelated QR Codes တွေဟာပျင်းစရာကောင်းပြီးပျင်းစရာကောင်းတယ်။ Pageloot ဖြင့်ဖန်တီးထားသောသင်၏စိတ်ကြိုက် QR ကုဒ်များအားလုံးသည် CTA တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များပိုမိုထိတွေ့စေရန်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ပုံရိပ်နှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် QR Code သည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏သတင်းစကား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ခံစားရပြီးဖောက်သည်နှင့်ချောမွေ့စွာဆက်သွယ်သည်။
သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အတွက်စိတ်ကြိုက် QR Code ဘောင်များ၊ ပုံစံများ၊ gradients နှင့်အမှတ်တံဆိပ်များကိုထည့်ပါ။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်တောင်ငှားစရာမလိုပါဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်အရာရာကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းတွင်အလွန်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိပါကစိတ်ပူစရာမလိုပါ - သင့်တွင်ရွေးချယ်ရန်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောတင်းပလိတ်များရှိသည်။
အဆင့်4- သင်၏ QR Code ကိုစမ်းသပ်ပါ
မထွက်ခင်သင်၏ QR Code ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါ
ဒါဆိုအခု QR Code ကိုနေရာတိုင်းမှာဖျက်ပစ်ရမလား။ စိတ်မကောင်းခြင်းထက်လုံခြုံမှုရှိခြင်းကသင်၏ QR Code ကိုအရင်စစ်ဆေးကြည့်ရအောင်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုအခမဲ့အသုံးပြုပါ၊ ၎င်းတွင်ကင်မရာအက်ပ်တွင်ထည့်သွင်းထားသောဘက်ပေါင်းစုံ QR Code စကင်နာရှိသင့်သည်။
တစ်နည်းအားဖြင့်သင်ပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရယူလိုပါကအရာအားလုံးမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်နေကြောင်းစစ်ဆေးလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည် အခမဲ့ QR Code ကိုစာဖတ်သူကို ဒီတာဝန်အတွက်။ ဒါကအရာရာတိုင်းဟာအလုပ်ဖြစ်သင့်တယ်၊ လုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတာအတိအကျပြောလိမ့်မယ်။
အဆင့် ၅ - သင်၏အောင်မြင်မှုကိုခြေရာခံပါ
သင်၏ QR Code စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအောင်မြင်မှုမက်ထရစ်ကိုခြေရာခံပါ
ကောင်းပြီကောင်းပြီ, ပွင်, ပွင်။ ယခုစတင်ရန်အချိန်ပါ။
သင်၏ QR Code ကိုမပုံနှိပ်မီ၊ ၎င်းကို vector format ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ ထို့ကြောင့်ပုံနှိပ်အရွယ်အစားမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ၎င်းသည်အမြဲတမ်းပြတ်သားလိမ့်မည်။ Vector format (.svg, .pdf နှင့် .eps) သည်အကန့်အသတ်မရှိအရွယ်အစားရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်ဆုံးဖြတ်ပါက၎င်းသည်ကြီးမားသောမိုးမျှော်တိုက်အဆောက်အအုံနံရံတွင်ပင်ပုံနှိပ်နိုင်သည်။
အခု QR Codes တွေထွက်လာပြီးလူတွေကသူတို့ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေကြပြီ၊ သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရတာကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ ပုဂုံး QR Code မီးစက်နှင့်စကင်နာ tools များသင်ရုံပူဇော်။
သင်၏ QR Code ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသောအခါသင်မြင်နိုင်ရုံသာမကသင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင်သင့်အားအထောက်အကူဖြစ်စေမည့်မည်သည့် browser နှင့်သူတို့အသုံးပြုနေသော browser နှင့်အခြားအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းသင်တွေ့နိုင်သည်။
အတွက် QR ကုဒ်များ App Store ဒေါင်းလုပ်များ
အတွက် QR ကုဒ်များ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး
ဘယ်လို QR ကုဒ်များတည်းဖြတ်ပါ